K: Facebook (သို့) ပုံရိပ်ယောင် နိုင်ငံတော်
Labels: Blogging , facebook , Reviews
ပုံရိပ်ယောင်တွေဟာ ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာတယ်။ ဒါကို လက်ခံရတော့မယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဆက်တော့ ကြည့်ကြတာပေါ့။
မကေရေ.. အခုထိတော့ face book နဲ့ မဆုံဖူးသေးဘူး.. သူများတွေ forum ခေတ်တုန်းကလည်း ယောင်လို့တောင် လှည့်မကြည့်တာ.. blog ကျမှပဲ ထိတော့တယ်.... :)
ကိုယ်ကတော့ ၀င်ထားပြီး တကယ့်အရင်းတွေပဲ လက်ခံထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်ပန်လိုပဲ ကြည့်နေတုန်း..
ကျနော်လည်း ဘလော့ကိုပဲ ဆက်ချစ်နေတုန်းပါပဲ..
ဘလော့လောက် ဘယ်ဟာမှ ရင်မခုန်ရသေးဘူးဗျာ..
အင်း.. သိပ်မသုံးဖြစ်သေးဘူး.. ဖွင့်တော့ဖွင့်ထားတယ်
ဘလော့ကလွဲလို့ ရောက်ဖူးတာဆိုလို့ MBS တခုပဲ ရှိသေးတယ်... တခြား ဘယ်မှကို မရောက်ဖူးသေးဘူး...
ခုတော့လည်း ဘလော့ကလွဲလို့ ဘယ်မှလည်း မသွားချင်တော့ပါဘူး...း)
ကြားတော့ ကြားဖူးတယ်။ ဘယ်ကို သွားရမယ်၊ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိလို့ မလုပ်ဖူးသေးဘူး။ ဘလော့ဂ်နဲ့တောင် ကိုယ့်အချိန်လေးကိုယ် မနည်း ပြန်ဆွဲထုတ်နေရတာ၊ facebook ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကလဲ သူငယ်ချင်းမက်တာနဲ့ မ၀င်တာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ။ ကေ့ ပို့စ်လေးဖတ်မှ ငါမသိတာတွေ အများကြီးပဲ လို့ ဗဟုသုတ အတော်ရ။ :)
အပြင်မှာ လူတွေ မတွေ့နိုင် လောက်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေကြတာ များလို့ နောက်ထပ် ပုံရိပ်ယောင် ကမ္ဘာလေးတစ်ခု fb ကနေ ဆက်သွယ်ကြဖို့ ထင်ပါရဲ့။ အချိန် ပေးရတာချင်း တူတူ ပုံရိပ်စစ် ကမ္ဘာကပဲ ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်။
နောက်များလည်း ရသ သမားတွေကို သုတတွေမျှဝေ
Face Book ရဲ့ မူလလက်ဟောင်း ဖေါက်သည် တဦးလာပါတယ်။
fb ကို စသုံးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းက ကျောင်းက ဆရာတစ်ယောက်က fb ကို သုံးပြီး သင်ခန်းစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ စာရွက်စာတမ်း တွေ ဖြန့်လိုပါ။ အဲဒါနဲ့ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေ fb မှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက်တော့ ၁၀ နှစ်ကျော် အဆက်အသွယ် ပြတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို fb ကြောင့် ပြန်ဆုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဖုန်းနံပါတ် အီးမေးလ် အပြန်အလှန် ဖလှယ် ဖြစ်ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အရင်လို အပြင်မှာ မဆုံနိုင်တော့ပေမယ့် Virtual World မှာ အမြဲ တွေ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ fb ရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်က ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ကနေ တစ်ဆင့် အခြား အဆက်အသွယ် ပြတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ရှာဖွေတွေ့နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး ရှိအောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။ အခုတော့ တစ်ခြား Social Networking Site တွေ တစ်ခုမှ မဝင်ဖြစ်တော့ဘဲ fb ပဲ ဝင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဘာလို့ လူတွေက တခြားမှာသုံးမယ့်အချိန်ကို ဒီမှာသုံးဖို့ ရွေးလာကြတာလဲ? စဉ်းစားစရာပဲ ..
ဒိန်းမတ်မှာတော့ vacation သွားမယ့်အကြောင်း facebook မှာ မရေးကြပါနဲ့လို့ သတင်းစာတွေက သတိပေးထားရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်ကိုဖောက်ပြီး ၀င်ခိုးမယ့်သူတွေက ဘယ်အိမ်တွေမှာ လူမရှိဘူးလဲ ဆိုတာ facebook ကနေ သိနေလို့ပါတဲ့။ လူဆိုးတွေလည်း ရှိနေတယ်နော်.. သတိ... သတိ... သတိ...
အား... face book က အဲလောက်တောင် နာမည်ကြီးနေမှန်းမသိ။ ခုပဲ ၀င်ကြည့်ဦးမှ။ တခါမှ မ၀င်ဖူးဘူး။ ကြားဖူးတာတောင် နှစ်ရက်နဲ့ တပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ်။ :D
ဘာလဲတောင် သေချာမသိပါဘူး..။အထဲက အခြေအနေနဲ့လဲ
အသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားမရင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးတာနဲအတူတူပဲ။
ဥပမာ ဘလောဂ့်ပဲလေ..။ဖြတ်မရတော့လဲ ဒီလိုပဲ..လုပ်နေရတာ။
အစ်မ ရေးထားတာက ချစ်စရာလေး..။နည်းပညာရော..နောက် အစ်မတို့ဆီက အခြေအနေရော..သိရတယ်။
Facebook ကို စသိကတည်းက အကောင့်လုပ်ထားတယ်။ အချိန်လည်း မပေးတော့ သုံးလည်း မသုံးတတ်ဘူး။ ကျင်လည်နေကျ ဘလော့ဂ်လောက် မစွဲဘူး ဖြစ်နေတယ်။
- စဉ်းစားမိတာက ကိုယ့်လို နောက်က လိုက်သုံးနေတဲ့လူက တိတိကျကျ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲနဲ့ နာမည်ကြီးသမျှ ဆိုရှယ်နက်ဝက်တွေကို လိုက်ပြီး သုံးနေရင် အချိန်ကုန်တာပဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကေ...
ပုံရိပ်ယောင်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်ရတာ အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်..
တခါတခါကျတော့ ပုံရိပ်စစ်တွေက စိတ်ကုန်စရာကောင်းလှတယ်လေ...။
*** ကေ... ကေ ကတို့ထက် တော်တော်လေး ငယ်မှာပါ...
နု-ဘလော့ကတော့..အားလုံးထိတာမှ အလဲလဲ အကွဲကွဲး)
မဂျီး- ၀င်ကြည့်လေ..သိရတာပေါ့..ဘာလဲ ဘလော့တွေနဲ့တင်..KMSL အတွက် အချိန်နဲနေပီလားး)
အမ-ကြည့်ယုံပဲကြည့်.. ဘာမှ မ၀ယ်နဲ့ ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်။ အချိန်ကုန်တယ်။
ကိုဆောင်း-ဘလော့ကို အသေအကြေ စွဲလမ်းသူများပေ့ါလေ..အသက်ပါပေး ချစ်မယ်လား..ဟဲ
Craton- တို့တွေလိုပါပဲ သိုးအုပ်ထဲက..သိုးလေးတကောင်ပေါ့..
ကိုအောင်သာငယ်- MBS နဲ့တင်..တော်တော်ပျော်သွားပြီထင်တယ်။
မီယာ- အဲဒါပေါ့..controversial ဆိုတာ-
မနော်- ခုတလော ကျမကို လက်ဆောင်မပေးတာ..ပန်းတွေ မပို့တာ ကြာပီ.. ပြန်လာခဲ့..သူခေါ်ပြီး
ဒူကဘာ- ကော်လိုရာဒိုက..ရုံးချုပ်မှာ သွားလုပ်ပါလား..ဖောက်သည် ပွိုင့်တွေနဲ့ဆို.. တခုခုတော့ ရမှာပါ။း)
ZT( ဖူးနုသစ်) အဲလိုမျိုးလဲ တကယ် အသုံးဝင်တယ်နော်။
ရွှန်းမီ- ဟုတ်တယ်..စဉ်းစားစရာပဲ..( စဉ်းစား..)
ကိုသက်ဦး- စိတ်ဝင်စားစရာ ဆိုးပြစ်လေးတွေပဲ..ဒါမျိုးတွေလဲ..အသိပေးရေးသားသင့်တယ်။
စိုးဝှက်- ၂ ရက်နဲ့တပိုင်းဆိုတော့..တပိုင်းက..စနေ့နေ့ဝက်အလုပ်ဆင်းတာထင်တယ်။ ညီမလေး ခုတလောစာသိပ်မရေးပါလား။
မကြေးမုံရေ- မသိတာ ခပ်ကောင်းကောင်းပဲ..ဒီ ကိုးနတ်ရှင်နဲ့ဆို.. မေ့ထားလိုက်။ သိပ်အရေးမပါပါဘူး..ဘလော့သာ ဆက်ရေး။
May Burma- Thank you for your comment. Yeh..It is interesting that's why I wanted to share it.
ဇနိ- သိုးအုပ် တွေလေ..
မသက်ဝေ- ဟုတ်ပါတယ်.. တခါတခါလဲ ပုံရိပ်စစ်တွေထဲက..ပြေးထွက်..မိုးပေါ်ပျံ.. ဘယ်လောက်ပျော်ဖို့ကောင်းလဲ။ ပြီးတော့..အောက်ပြန်ဆင်း..ထမင်းချက်ပေါ့..ဟားဟား
အဝေးရောက် အနီးရှိ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ သတင်း အမြဲသိရအောင် frienster, ning, facebook အကုန်သုံးပါသည်...
တို့ တော့ ဘလော့ဂ်လေးတောင်မနည်း အသက်ဆက်ထားရတာ။ မေးလ်တွေကတော့လုပ်ထားတာများပြီး pw တွေလည်းမေ့ကုန်လို့ မဖွင့်ရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီးလမ်းလေးဘာလေးလည်းလျှောက်ဦးနော် ကေ။
ပုံရိပ်ယောင်နိုင်ငံတော်သားကြီး ပီတိရေ- double tax ကနေ..triple tax ဖြစ်နေအုံးမယ်။
ချာမယု- လျှောက်ပါသော်ကောနော်.. ညနေတိုင်း..မယုံရင်.. ကျုံးဘေးက..အုန်းပင်တွေ ကြည့်..အဲဒီပင်စည်တွေအတိုင်းပဲ..ပိန်ပိန် ဖြောင့်ဖြောင့်လေး.။။း)
ကေရေ… အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဟိုတစဒီတစ face bookဆိုတာကို ကေ့ဆီရောက်မှ ရေလည်တော့တယ်.. ဘလော့ဂ်တောင်မနဲဘလော့ဂ်နေရတော့..အင်း… ပုံရိပ်ယောင်မှာ လူတွေ အရမ်းပျော်မွေ့ သွားရင်လဲ လက်တွေ့ ဘ၀တွေ တဖြေးဖြေးသွေ့ ခြောက်လာမှာ စိုးမိတယ်…
facebook ဆိုတော့လည်း facebook ကြတာပေါ့။ အချိန်တော့ ကုန်တယ်။ ဒါပေမယ့်... ပြန်ရတဲ့ ပီတီတွေလည်း ရှိပါတယ်။ facebook က သုံးတတ်ရင်တော့ ဆေးပါပဲ။ မသုံးတတ်ရင်တော့ ဘေးပါပဲ။
မှတ်ချက်။ ။ ပီတီလို့ ခေါ်တဲ့ ဘလော့ရေးတဲ့ လူကြီးကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
FB ကို social networking အတွက် သုံးတယ်။ သူ့မှာ ပေါ်သမျှ application တွေ လိုက်မသုံးမိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ အချိန်စားလွန်းတာရယ်၊ ကိုယ့် info တွေကို ဘယ်သူမှန်း မသိသူတွေက access ရကုန်တာရယ်ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း FB profile မှာ ကိုယ့်အကြောင်း ဘယ်လောက် တင်မယ် ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ သတိနဲ့ သုံးရင် အကျိုးများပါတယ်။
မတန်ခူးရေ- ဟုတ်တယ်- လူမူပုံစံတွေကတော့..နည်းပညာ အသစ်အဆန်းတွေ နဲ့အတူ ပြောင်းလိုက်နေတာပါပဲ။
ဇူလိုင်- စားတဲ့ပီတိ ကို သိပါတယ်။
မနုသွယ်- ပြောတာထောက်ခံ တယ်။ လျှောက်ကလိ နေလို့ကတော့..ကိုယ်က..သားကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
Facebook and twitter are equally powerful. Use them for your own advantage. Exact purpose of usage depends on how you use them. Both of them are good for social marketing or marketing for our blogs. Asabusiness man, choices are broader.
I wanna know, who is kay??